Yamin Aye's Page - Myanmar Network
Yamin Aye's Likes
Yamin Aye's Friends
Yamin Aye's Discussions
သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ
Started this discussion. Last reply by Yamin Aye Sep 27, 2018.4Replies6Likes
လူသားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးက ၀င်ငွေ (Income) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရေးကြီးဆုံး ၀င်ငွေကို ရှာဖွေကြရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ ၀င်ငွေလုံးဝမရှိသေးသူများဟာ အလုပ်အကိုင် (Job)…Continue
Tags: အခွင့်အလမ်း, အလုပ်အကိုင်
Vocational Education for Youth စကားဝိုင်း
Started Jan 17, 20180Replies 1 Like
၁) လူငယ်များအတွက် ၁.၁) Switzerland နိုင်ငံတွင် သင်ကြားနေသော Dual Education & Training…Continue
Started this discussion. Last reply by Lynn Htein Jul 20, 2017. 1 Reply6Likes
money ဆိုတဲ့ ငွေအကြောင်း နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်။ ငွေကြောင့် ဘာတွေပြောင်းလဲသလဲ။ ဒီတော့ အမြင်လေးတွေလည်း လိုချင်ပါတယ်Money ငွေIfaman runs after money, he is moeny man. ငွေနောက်လိုက်တော့ ဥစ္စာရူးတဲ့။If he…Continue
အလုပ်ရှာနေသူများအတွက် Job Readiness Trianing အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း
Started Jul 10, 20170Replies4Likes
Job Readiness Training for the Youth ------------------------------ CVT Alumni မှ လူငယ်များ…Continue
Thumbs Up From Myanmar Network
Yamin Aye's Page
myanmar network အဖွဲ့သားတို့
စာပေပန်းခင်း myanmar network တွင်
အဖွဲ့သားတို့၊ သွားစို့ ခရီးတူ........
အဖွဲ့သားတို့၊ ရေးစို့ စာပေချိုချို......
ရေးကြသည့်စာ၊ ကာရန်ညီထွေ အတူရေးရင်း
ရန်သူ မိတ်ဆွေ မခွဲခြားပဲ
myanmar network အဖွဲ့သားတို့...........
၇၊ ၂၊ ၂၀၁၁ ည ၁၁:၃၅ ရေးစပ်သည်။
Yamin Aye's Blog
Food & Beverage Service Teacher at Hotel & Gastronomy Profession
Posted on March 2, 2020 at 15:270Comments0Likes
Communication Executive Position
Posted on January 23, 2020 at 16:550Comments0Likes
Posted on March 12, 2019 at 16:420Comments0Likes
VACANCY Position: Communication Executive Job function: Marketing, Communication and Partnership Location: Yangon Schedule: Full-time Closing date: 30 July 2018 Applicat…
Posted on July 11, 2018 at 16:170Comments0Likes
CVT Myanmar isanon-profit making organization,…
VACANCY Position: Head of Admin and Human Resources Job function: Please see below Location: Yangon Schedule: Full-time Closing date: 20. May 2018 Application: S…
Posted on May 3, 2018 at 15:260Comments0Likes
Position: Head of Admin and Human Resources
Closing date: 20. May 2018
CVT Myanmar isanon-profit making…
Posted on May 3, 2018 at 15:000Comments0Likes
At 12:26 on January 4, 2020, Htoo Aung Wint said…
ဒီနေ့မှ Myanmar Network ကို ပြန်ဝင်ဖြစ်တယ်။ သတိတရနဲ့ အလည်လာသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ နှစ်သစ်တစ်ခုရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်...
At 22:51 on July 30, 2019, Htoo Aung Wint said…
သိပ်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စာသားတွေအတွက် ကျေးဇူးပါဗျ။ အခုမှ ဝင်ကြည့်ဖြစ်လို့ Reply နောက်ကျသွားတာကိုလည်း Sorry ပါ ...
At 11:48 on July 10, 2019, myinthlaing said…
At 19:15 on January 27, 2019, Yin Min Myint Z∂w said…
မင်္ဂလာပါ မမရေ. သမီးလည်း myanmar network ကို မရောက်ဖြစ်တာ တော်တော့်ကိုကြာသွားတယ်. ဒီနေ့မှပဲ ပြန်လာဖြစ်တယ်. ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ နှစ်စဉ် မမရဲ့နှစ်သစ်ကူးဆုမွန်ကောင်းလေးတွေကို တွေ့တော့ တော်တော့်ကို အံ့သြ၀မ်းသာသွားတယ်. တကယ်ပါ. ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် မမ. myanmar network ကိုလည်း မကြာမကြာ လာပြီးစာပြန်လေ့လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်..
မမ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ.. ^_^
At 9:32 on October 12, 2017, Htoo Aung Wint said…
စာမရေးဖြစ်တော့ ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာနဲ့ Myanmar Network က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နည်းနည်း အဆက်ပြတ်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ သူငယ်ချင်း...
At 17:49 on September 3, 2017, Myo Myint Kyaw said…
ငါ နာမည် ပြန်ပြောင်းထားတယ်
linn Sat (လင်းစက်) ဟီး
At 16:04 on June 20, 2017, Soe Thiha said…
At 11:39 on February 27, 2017, Htoo Aung Wint said…
ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့ ဘဝတိုတိုလေးထဲမှာ ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သိကျွမ်းခင်မင်ခွင့်ဟာ လူသားတစ်ယောက်အတွက် လှပတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုပါ...
At 18:32 on April 14, 2016, Yin Min Myint Z∂w said…
hi, ma ma. how are you? ^_^
At 15:52 on June 30, 2015, Myo Myint Kyaw said…
hi fri.. long time no see....h